Soo-saarista Hawada Kartoonada ee Shiinaha iyo Warshad | Huade
Rakibidda Kaararka Kartoonka waxaa badanaa lagu rakibay keydinta aaladda mashiinka iyada oo la soo saarayo isla markaana laga dalbado xarumaha saadka. Waxay ka kooban tahay laba qaybood: qaabdhismeedka hayayaasha (rack) iyo tareennada socodka qulqulaya. Khadadka socodka waxay ku yaalliin garoon injineernimo.
Rakibidda Kaararka Kartoonka waxaa badanaa lagu rakibay keydinta aaladda mashiinka iyada oo la soo saarayo isla markaana laga dalbado xarumaha saadka. Waxay ka kooban tahay laba qaybood: qaabdhismeedka hayayaasha (rack) iyo tareennada socodka qulqulaya. Tareenka socodka ayaa lagu dhejiyay garoon injineernimo .oo u oggolaanaya weelka in la dhigo dhamaadka sare ee salka oo u sii dhaadhaco dhamaadka soo dejinta .Rollers ha u oggolaadaan in weelku si habsami leh ugu socdo culeyska. Mar haddii weelka laga saaro dhamaadka dejinta, weelka soo socda ee soo socda ayaa si toos ah horey ugu socda .Waxay asal ahaan ka kooban tahay shan qaybood: RHS Beam oo leh xagal (xagal hore iyo xagal leh xaglo), RHS Beam (Belar Dhexe oo aan xaglo lahayn), Saxanka kala qaybinta, Saxan dhinac ah, Isukeenid (galvanized) . Xagasha guud ee jaangooyuhu waa 3-4 ° ， Marka loo eego deegaanka isticmaalka, Waxaa loo qaybin karaa nooca dogob iyo nooca jir.
Rullaluistarku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay alwaaxyada hore iyo gadaal iyo dogobka dhexe ee taageera, iyo dogobku wuxuu si toos ah ugu laalaadaa qummanida. Rabitaanka rakibaadda ee Rack Rack waxay kuxirantahay cabirka, culeyska kartoonka iyo qoto dheerida Rack Rack, badanaa 5% - 9%. Awoodda qaadista ee rullaluistemadka waa 6kg / gabal. Marka alaabtu culus yihiin, 3-4 qaybood ayaa lagu rakibi karaa hal tareen. Guud ahaan, hal dogob taageer ah ayaa lagu rakibaa 0.6m kasta oo qoto dheer jihada si loo kordhiyo qallafsanaanta rollers. Markuu tareenku dheeryahay, tareenka waxaa lagu kala saari karaa iyadoo la kala qaybinayo saxanka. Biriigu waa in lagu rakibaa meesha laga soo qaado si loo yareeyo alaabada loona yareeyo saameynta.
Rakib Carton Flow waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wax soo saarka, ganacsiga, xarunta wax loo qeybiyo, aqoon isweydaarsiga shirarka iyo bakhaarada oo leh soo-dejin heer sare ah. Waxay qaadataa biraha xarkaha leh iyo biraha aluminium aluminium, waxay ogaataa FIFO adoo adeegsanaya miisaanka iskeed ee alaabta, waxayna ku habboon tahay labada dhinac ee xariiqda isku imaatinka iyo xarunta qaybinta.
Magaca Sumadda Huade
Nooca Rakibida Kartoonka
Waxyaabaha Q235 bir
Shahaadada CE, ISO9001: 2015
Midab sida looga baahan yahay.
Daaweynta dusha sare Dahaarka budada ama galvanized
Cabirka godka qumman Dalool dheeman
HS lambar 7308900000
Baakadaha Labada toosan iyo dogobyada kuxiran gudaha gudaha si adag ayaa loogu xiray suumanka birta ah. oo leh filimka 'PE' oo lagu daboolay dhammaan, kartoonnada waraaqaha ah ee loogu talagalay qalabka.
Dekedda Nanjing ama Shanghai (Nanjing waxaa lagula talinayaa sabab dhaqaale)
Hore: Raaxada Cantilever
Xiga: Ku wad Rack